संक्रमित बढे पनि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या न्यून (भिडियो पनि) - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
सुमित्रा लुईंटेल || 18 January, 2022
कोरोनाको तेस्रो लहरले फेरि संक्रमितको संख्या उकालो लाग्ने क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो एक हप्ताको तथ्यांक हेर्दा संक्रमितको संख्या दोब्बर भएको छ । अहिले नेपालमा डेल्टा भेरियन्ट बाहेक ओमिक्रोन पनि क्रमश: फैलन थालेको विज्ञहरूको आशंका छ । विगत केही दिनमा काठमाडौं उपत्यकाको अस्पतालहरूमा कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षणसहित जँचाउन आउने बिरामीको संङ्ख्या ह्वातै बढेको छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल टेकुमा मंगलबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा सात जना बिरामी आइसोलेसनमा भर्ना भएका छन् भने पाँचजना आईसीयूमा भर्ना छन् । अस्पतालमा अहिले जम्मा १२ जना बिरामी भर्ना भएको टेकु अस्पतालका प्रवक्ता डा.किजन महर्जनले बताए । जिन सिक्वेन्सिङ एकदमै कम भएकोले ओमिक्रोन वा डेल्डा कुन भाइरसको कारणले संक्रमित बढेका हुन् यकिन भन्न नसकिने डा. महर्जन बताउँछन् । ‘विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान अनुसार ओमिक्रोन अन्य भेरियन्टमा तीन गुणा छिटो सर्छ भनिएको छ ,’ उनी भन्छन् ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा सामान्य प्रकृतिका बिरामी बढेका छन्, तर परीक्षण गर्न आएकामध्ये ५० प्रतिशतमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ ।’
पोजेटिभ रेट एकदमै बढेको छ । मंगलबारमात्रै १० हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् । यसरी संक्रमितको संख्या फैलिएअनुसार ओमिक्रोन समुदायस्तरमा फैलिसकेको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन तथा छाती रोग विशेषज्ञ डा. निरज बम बताउँछन् ।
छिटो फैलने भएकोले अहिले चिकित्सक तथा नर्सहरू पनि संक्रमित भएका छन् जस्ले गर्दा अस्पतालमा जनशक्तिको समस्या परेको डा. बम बताउँछन् । ‘टिचिङ अस्पतालमा अहिले तीन सयको हाराहारीमा चिकित्सक तथा नर्सहरू संक्रमित भएका छन्,’ उनले भने, ‘ओमिक्रोन समुदायिकस्तरमा फैलिसकेको छ । यसरी ह्वातै संक्रमितको संख्या बढेको देख्दा ओमिक्रोन नै कारक भएको जस्तो लाग्छ ।’
डेल्टा संक्रमितको संख्या लगभग ७ हजारको हाराहारीमा पुग्दा स्वास्थ्य संरचना कमजोर भइसकेको थियो । ओमिक्रोन १० हजार पुगिसकेको छ र अझै बढ्ने क्रममा छ । तैपनि, अस्पतालको शय्या नपुगेर बाहिर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नभएको डा.बम बताउँछन् ।
कोरोना दोस्रो लहरमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, दोस्रो लहरको महामारी कम भएलगत्तै अस्पतालमा अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचार पनि गर्न शुरू भयो । त्यसैले, अहिले कोभिड र नन-कोभिडका बिरामीको पनि इमरजेन्सीमा उपचार भइरहेको अस्पतालका डा. श्रवणकुमार मण्डल बताउँछन् । ‘केही हप्तायता संक्रमितको संख्या बढे पनि अस्पतालमा भर्ना हुन आउने संक्रमितको संख्या भने सोचेभन्दा कम छ,’ उनले भने ।
डा. मण्डलका अनुसार संक्रमितहरूमा लक्षण सामान्य छ । ‘दोस्रो लहरको बेला श्वासप्रश्वासको समस्या लिएर अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्या एकदमै बढी थियो तर, अहिले सामान्य लक्षण भएकोले होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढी छ ।’
कुन अस्पतालमा कति छ बिरामीको संख्या ?
बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा जनरल बेडमा २० जना, एचडीयूमा ८६ जना, आइसीयुमा ७ जना र भेन्टिलेटरमा २ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
यसैगरी, छाउनीस्थित श्री वीरेन्द्र अस्पतालको जनरल बेडमा २३ जना , एचडीयूमा ५४ जना र आइसीयुमा ११ जना उपचाररत रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
त्यस्तै, वीर अस्पतालको जनरल बेडमा ५९ जना, एचडीयूमा २४ जना, आइसीयुमा १३ र भेन्टिलेटरमा २ जनाको उपचार भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी अस्पतालमा एचडीयू १ सय बेड, आईसीयू ३० बेड र भेन्टिलेटर ३० बेड रहेका छन् । एचडीयुमा १३ जना उपचाररत छन् ।
त्यस्तै, वीर अस्पतालमा जनेरल बेडमा ५९ जना, एचडीयूमा २४ जना, आईसीयूमा १३ र भेन्टिलेटरमा २ जनाको उपचार भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी अस्पतालमा एचडीयू १ सय बेड, आईसीयू ३० बेड र भेन्टिलेटर ३० बेड रहेका छन् । एचडीयूमा १३ जना उपचाररत छन् ।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा जहाँ एचडीयूमा ७, आइसीयुमा ३ र भेन्टिलेटरमा २ जनाको उपचार भइरहेको छ ।यसैगरी, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जनरल बेडमा २१ जना, एचडीयूमा १५ आइसीयुमा ८ जना र भेन्टिलेटरमा १ जनाको उपचार भइरहेको छ ।ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालमा जनरल बेडमा ४३ जना, एचडीयूमा ३४ जना, आइसीयुमा १२ जना र भेन्टिलेटरमा ७ जना उपचाररत छन् ।
सक्रिय संक्रमितमध्ये ०.३८ प्रतिशत आईसीयु र ०.०७ प्रतिशत भेन्टिलेटरमा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको कोभिड तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३९ हजार ४४ जना सक्रिय संक्रमित छन् । जसमध्ये ०.३८ प्रतिशत आईसीयु र ०.०७ प्रतिशत संक्रमित भेन्टिलेटरमा छन् । संक्रमितको संख्या उकालो लागेको तुलनामा आईसीयु र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुने अनुपात निकै कम रहेको डा. बम बताउँछन् ।
कति छन् काठमाडौं उपत्यकामा सक्रिय कोरोना संक्रमित ?
काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्न थालेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजार ५ सय ४९ संक्रमित थपिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा चार हजार चार, ललितपुरमा ९ सय ७५ र भक्तपुरमा ५ सय ७० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर कूल परीक्षणको ४४.९ प्रतिशत संक्रमण पुष्टि भएकामा उपत्यकामा मात्रै २४.३ प्रतिशतमा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हाल काठमाडौंमा १७ हजार ७०९ जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन् भने ललितपुरमा ४ हजार ४७१ र भक्तपुरमा २ हजार २९६ गरी कूल २४ हजार ४७६ जना सक्रिय संक्रमित छन् ।
भिडियो– किरण स्याङ्बो